IsiZulu Podcast: Ngabe IMamelodi Sundowns Ingaphonswa Inselelo KuPSL » Hollywoodbets Sports Blog
Konke kubukeka kulula kakhulu kwiSundowns kwiDTSV Prem. Abanye baze bakholwe wukuthi bangawina iligi bengakahlulwa. Kulesi siqephu, sibheka imidlalo yangempelasonto.
Konke kubukeka kulula kakhulu kwiSundowns kwiDTSV Prem. Abanye baze bakholwe wukuthi bangawina iligi bengakahlulwa. Kulesi siqephu, sibheka imidlalo yangempelasonto.https://t.co/nCBshltnYi
— Hollywoodbets (@Hollywoodbets) October 12, 2021